Digniin Ka Timid Beesha kablalax Daarood ee Denmark.
Posted to the AllPuntland.com December 18, 2001
Warar naga soo gaarey ilo aannu ku kalsoonahay ayaa sheegaya in kooxda carta ay si joogto ah uga waddo fidno iyo isku dir deegaanno kala duwan oo Beesha Kablalax.
Waxaa la sheegayaa in dhammaanba meelaha ay ka midka yihiin Sanguuni, Calanley, Jilib, Guduudey iyo Faanoole ay dad ka socda kooxda carta ka wadaan dil, dhac, kufsi iyadoo dadkii halkaas degganaa lagu khasbayo inay si khasab ah u saxiixaan una wareejiyaan mulkiyaddii guryahooda iyo beerahooda, haddii kalena la dilayo, taasina ay kooxda carta iyo xulufadeeda ku caddaynayso dembiyadii burcadnimada iyo argagixisannimada ee hore loogu eedeeyey. Ilaa 8 qof ayaa ilaa hadda la sheegayaa in lagu diley deegaannadaas. Dhowaanna waxaan soo tebin doonnaa haddii eebbe idmo khasaaraha meelahaas ka dhacay oo tafatiran.
Kooxdu waxay si joogto ah ugu hawllan tahay inay fidno iyo dagaal ka dhex oogto deegaannadayada, taasoo ay caddaatay inay dhowaan lacag badan soo siiyeen nin u dhashay Beesha Kablalax Daarood kaasoo ku diley hal nin oo isla beesha ah Libooya, ka dibna u baxsaday meeshii laga soo diray.
Waxaan ugu baaqaynnaa bulsho weynta adduunka in fiiro gaar ah iyo indho dheer loo yeesho dalalka iyo ururrada dhaqaalaha siiya kooxdaas ka hurinaysa dagaalada cusub dalka Soomaaliya. Dhammaan aqoon yahannada iyo indheer garadka u dhashay beesha Kablalax Daaroodna waxaan u soo jeedinaynnaa in ay dalalka ay joogaan la socodsiiyaan waxa ay dhab ahaan tahay kooxda carta iyo inayan haba yaraatee wakiil ka ahayn waxna loogu dhiibi karin dadka iyo dalka Soomaaliyeed.
Dadka Reer Kablalax Daarood oo ku sugan dalkiina waxaan leenahay "xoolo ma ahidin ee dad ayaad tihiin ee yaan kooxda carta oo wali laga haysto madaxtooyadii, dekeddii, iyo garoonkii magaalo madaxdii dalka ee Muqdisho isla markaana ciidammada u soo dirtay kana dagaal gashay Kismaayo isaga kiin dhigin dawlad oo isku kiin dirin". Nin kasta oo idinka dhashay oo wali maanta kooxdaas u shaqaynayaana waa dillaal aan idiin hayn wax dan ah.
Xulufada weerarka ahna waxaan leenahay, dhalanteed ayaa iskiin tusay. Marnana kuma guuleysan doontaan gardarrada, weerarrada qaawan iyo kibirka aad waddaan. Dhul cusub saas laguma helo, idinkoo qabyaalad ku maamulanayana shaar qaran nooma soo gashan kartaan. Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa, "nin aan kuu furi doonini yuusan kuu rarin". Waxaa kale oo lagu maahmaahaa, "war ninkii hadhoow hoosayn doonoow haddeer joog".
Beesha Kablalax Daarood waxay diyaar u tahay wax kasta oo lagu gaari karo heshiis iyo nabad ku wada noolaansho, iyadoo ayan deegaannadeedu ku jirin wax gorgortan ah. Waxaa kale oo ka go’an inay beel kasta oo Soomaaliyeed kaga abaal mariso samaan iyo xumaan hadba kii ay geysato.
Kooxda Carta oo aan wakiil ka ahayn cidna waa inay deg deg ugu noqdaan deegaannadii ay ka yimaadeen, intii ay maqaar saar ahaan u joogi lahaayeen magaalada Xamar. Haddii ay iskood uga bixi waayaanna in dadka deegaanku khasab ku oggolaysiiyo ayaa ku habboon. Waayo waa koox danaysato ah oo gacan saar la leh argagixisooyin iyo shuftooyin, taasna waxaa u ah marag inay qirteen inay ku soo duuleen Kismaayo walina maanta ka wadaan xasuuq iyo dulmi gobolkaas iyo meelo kale oo badan.